Cheap Flights to Zimbabwe from £479 | JETCOST
Zimbabwe is a vibrant destination blessed with stunning scenery, abundant wildlife and a friendly welcome for visitors. Your cheap flights to Zimbabwe will take you to a place that has both ancient monuments and modern cities along with some of Africa's most impressive natural sights. Zimbabwe's wide open spaces are a must for anyone with a thirst for the great outdoors. All of this is easily accessible for visitors who use their flights to Zimbabwe to explore this extraordinary place.
Get your cheap flights to Zimbabwe comparing all available airfares on Jetcost
The power of the Victoria Falls is is a must-see for any visitor who takes flights to Zimbabwe. "The Smoke That Thunders", as local people call the Falls, is classified as the largest waterfall in the world based on the volume of the huge sheet of water that plummets down a sheer drop of 100 metres on the Zambezi River. Your cheap flights to Zimbabwe will also allow you to experience:
Great Zimbabwe, the awe-inspiring ruins of a great civilisation
Lake Kariba, the world's largest man-made lake with its wildlife and watersports
Walking in the lush mountains of the Eastern Highlands
Matobo, with its extensive wildlife
The capital city, Harare, has a fascinating history in colonial times and since independence in 1980. Contemporary art and those who make it are to be found at the Chapungu Sculpture Park. Wherever you are headed in Zimbabwe, you'll easily find a hotel Zimbabwe which caters to your taste and budget.
Most cheap flights to Zimbabwe land at Harare International Airport (HRE), 15 kilometres from the city centre with many taxis available to transport visitors to onward destinations. Flights to Zimbabwe from Johannesburg and some other African cities may also land at Joshua Mqabuko Nkomo International Airport (BUQ) 24 kilometres outside the city of Bulawayo where taxis are also plentiful, and Victoria Falls Airport (VFA) which is 18 kilometres outside of the town of Victoria Falls with hotel shuttle services available. Wherever you are travelling in this captivating country, car hire in Zimbabwe will allow you to discover the real magic of Africa at your own pace.
£479 Cheap flights to Harare
£605 Cheap flights to Victoria Falls
£762 Cheap flights to Bulawayo
Top airlines flying to Zimbabwe